के भारत नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन मद्दत गर्दैछ ? | Sindhuli Saugat
के भारत नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन मद्दत गर्दैछ ?
राजावादी दलका रूपमा चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भारतको आम निर्वाचनपछि नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन हुनसक्ने संकेत गरिरहँदा भारतीय गणतन्त्र दिवसमा नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मुख्य अतिथिमा बोलाउने तयारी भएको समाचारले ‘बहस’ खडा गरेको छ ।
एक महिना अघि थाइल्यान्ड, श्रीलंका, माल्दिभ्स हुँदै भारतको अनौपचारिक भ्रमण गरेर फर्किएका ज्ञानेन्द्रसहित रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमर पुटिनलगायत विकल्पमा मुख्य अतिथि हुन लागेको बताइन्छ । यसअघि गणतन्त्र दिवसको मुख्य अतिथिका लागि भारतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई निम्तो दिएको थियो तर ह्वाइटहाउसले त्यसलाई अस्वीकार गरेको जनाइसकेको छ । यसमा भारतले रूससँग गरेको हतियारलगायतका साझेदारीका रूपमा टिप्पणी गरिएको छ । त्यसपछि वैकल्पिक मुख्य अतिथिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको समेत नाम लिस्टमा राखिएको बताइएको छ ।
२६ जनवरी भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर ज्ञानेन्द्रलाई बोलाउने तयारी भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । उनीसँगै अन्य मुलुकका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई निम्तो दिने तयारी भएको उल्लेख गरिरहँदा नेपालका गणतन्त्रवादी दल र सरकारलाई भने भारतले उक्त अवसरमा बोलाउने कुनै छनकबारे मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छैन । भारतको न्युज १८ च्यानलको अफिसियल अनलाइन पोर्टल फस्र्टपोस्टको अंग्रेजी संस्करणले नेपालका अन्तिम राजालाई भारतले बोलाउने तयारी गरेको लेखेको थियो ।
केही विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको चुनाव नजिकिएका कारण त्यहाँको संस्थापनले उठाएको हिन्दूत्वको नारालाई अझ बलियो बनाउनका लागि ज्ञानेन्द्रलाई अतिथिका रूपमा बोलाउने तयारी भएको हुनसक्छ । तर, यस विषयलाई भारतीय संस्थापनले पनि आधिकारीक रूपमा पुष्टी गरेको छैन । यद्यपि, ज्ञानेन्द्रसँग भारतीय संस्थापनले देखाएको लगाव र सम्बन्ध अनि उनको तारान्तरको भारत भ्रमणले केही न केही प्रभाव राख्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
धार्मिक मान्यताका आधारमा ज्ञानेन्द्र भारतको अहिलेको प्रशासनसँग अलिक नजिक छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रशासनका विश्वासपात्रहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई मानसम्मान पनि गरेकै छन् । गएको बर्षको अन्त्यतिर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कार्यालयमा स्वागत गरी सम्मान गरेका थिए ।
दशैंको शुभकामना दिने क्रममा ज्ञानेन्द्रले विभिन्न राजनीतिक दलसँग भएका सहमतिका विषयमा बोल्दै मुलुक जटिल अवस्थामा परेकोबारे राजनीतिक चिन्ता देखाएका थिए । उनको चिन्ता व्यवस्था परिवर्तनसहित जनताको आशा र अपेक्षासँग जोडिएको थियो । त्यसअघि उनी बुहारी पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहसहित बैंकक, श्रीलंका, माल्दिभ्स र मुम्बईको भ्रमणमा थिए । तर, निर्मलनिवासले उक्त भ्रमणलाई बैंककमात्र भनेकोम थियो । ति मुलुकहरूमा भारतीय संस्थापनका विशेष अधिकार राख्ने व्यक्ति र प्रशासनका व्यक्तिसँग उनीहरूको मिहिन तरिकाले छलफल भएको अनुमान धेरैले लगाएका थिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका सञ्चार सहयोगी डा. फणिराज पाठकले यस विषयमा विशेष जानकारी नभएको बताए । ‘मैले पनि यो समाचार पढेको हुँ, यस विषयमा सरकारसँग बुझ्न पाएको छैन । तिहारपछि मात्र यस विषयमा केही भन्न सकिएला ।’ निर्मलनिवासले पनि भारतीय गणतन्त्र दिवसमा आफुलाई आएका निम्तो र मुख्य अतिथिको प्रस्तावबारे केही खुलाएको छैन ।
भारतमा २०१९ मा अर्को आम चुनाव हुँदैछ । अहिले चुनावी चहलपहल र राजनीतिक दाउपेच चलेका कारणले उसले नेपाली राजनीति र व्यवस्थामाथि टिप्पणी गरेको छैन । भारतीय जनता पार्टी बहुमतका साथ आगामी चुनावमा मोदीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा जुटेको छ ।
पछिल्लाे - केशव स्थापितको मन्त्री पद धरापमा
अघिल्लाे - माधव कुमार नेपाललाई नचिन्दा २५ लाख रुपैया भारु गुम्यो